Kufuneka ube ne-ph ph yedijithali kunye neemodeli ezilungileyo | Ngeentlanzi
IsiJamani sasePortillo | | Ihlaziywe 15/07/2021 14:39 | Izixhobo, abanye
Xa sinetanki leentlanzi kubalulekile ukwazi iimpawu kunye neemfuno zohlobo esizikhathaleleyo. Enye yeenguqu ezibalulekileyo ukuze sikwazi ukuba nemeko-bume entle kwi-aquariums zethu yi-pH. Amanzi aneqondo elithile lobumuncu kuxhomekeke kumaqondo obushushu kunye neempawu zawo. Ukuze wazi ukuba yeyiphi i-pH efanelekileyo kakhulu kwiintlobo zethu, kukho i-digital pH yeemitha.
Kweli nqaku siza kuchaza ukuba zeziphi i-pH yeemitha zedijithali kwaye senze ukhetho lwezona zilungileyo.
1 Zithini i-digital pH yeemitha
2 Yintoni emele ukuba nee-pH zedijithali
3 Ibhetri, ubungakanani kunye noyilo
4 Ezona mitha ze-pH zidijithali zibalaseleyo
Zithini i-digital pH yeemitha
Ukwazi iimpawu zamanzi okanye umhlaba kubalulekile ukuba wazi iidigri ezinokuba nazo malunga ne-asidi okanye i-alkalinity. Enye indlela yokwenza ukuba isebenze, ikhawuleze kwaye ichaneke kukuba neemitha ze-pH yedijithali. Sisisixhobo esiluncedo kakhulu kwaye sichaneke ngakumbi ukuze sikwazi ukufumana amaxabiso e-pH amanzi okanye umhlaba. Ndiyabulela koku kuchaneka kunye nesantya, ifile okanye yaziwa ngokuhamba kwexesha.
Ngaphambi kokuthenga isixhobo esinjengalesi kubalulekile ukuba wazi zonke iimpawu ezisisiseko kunye nohlobo lwazo, ukusetyenziswa kunye nemilinganiselo. Zininzi iimodeli onokukhetha kuzo kunye neendidi ezininzi kwintengiso onokuthi ufune umsebenzi onzima. Ke ngoko, ukujonga ngcono iimodeli ezahlukeneyo ezikhoyo kunye nokuququzelela oyena ulungele imeko nganye, siza kwenza uhlobo lokuthelekisa phakathi kweemodeli ezaziwayo nezisetyenziswayo.
Yintoni emele ukuba nee-pH zedijithali
Awunokwazi ukuba yeyiphi eyona mitha ilungileyo ukuba awuyazi ukuba yeyiphi imitha ye-pH yedijithali ekufuneka unayo. Kuyimfuneko ukwazi ngokuchanekileyo ukuba zeziphi iipropathi zeekhemikhali zaso nasiphi na isisombululo okanye ulwelo nangaphezulu ukuba sinemfuyo ngaphakathi kwazo. Ngalesi sixhobo ungazazi ezi zinto zixabisekileyo ngokulula xa usebenzisa kwaye ufunda.
Ukubala kwe-pH kuya kuhlala kumaxabiso ukusuka ku-0 kuye ku-14 kwaye ngokuxhomekeke kwimodeli oyikhethayo ukuba uyisebenzise ngokwakho, unokubona imilinganiselo kwiscreen seLCD. Siza kuhamba ngamacandelo ukubona ukuba esi sixhobo kufuneka sibe kumgangatho olungileyo.
Into yokuqala ekufuneka uyazi kukusetyenziswa oza kukunika isixhobo ekubhekiswa kuso. Kuxhomekeka kolu setyenziso, sinokutshintsha phakathi kwemodeli kunye nohlobo lwesixhobo okanye esiza kukhetha. Ukuba lixesha lokuqala usebenzisa ezi zixhobo uya kubona ukuba umsebenzi ulula. Luxanduva lwayo ukubala ubungakanani beebhiliyoni ze-hydrogen eziselulwelo okanye emhlabeni apho zisetyenziswa khona. Yonke imilinganiselo engaphantsi kwexabiso le-7 iya kuba ne-asidi kwaye yonke imilinganiselo engaphezulu kwe-8 iya kuba yi-alkaline. Ngokwesiqhelo ukuba amaxabiso aphakathi kwesi-7 nesi-8 ithathwa njengeXabiso elingathath'icala.
Kukho iimitha ze-pH zedijithali ezisebenza ngeentambo, kukwakho nezo zinemicu okanye iphepha kunye neziphathwayo. IiLaptops zezona zixhaphake kakhulu kwaye zinokusetyenziswa ngabo bobabini abaqeqeshi kunye nabaqalayo. Banethuba lokuba ungabathatha naphi na kuba abanazo iiplagi kodwa endaweni yoko basebenze ngeebhetri. Ukongeza, banemisebenzi ephucukileyo kwaye uninzi lwazo luzisa umsebenzi wembuyekezo wobushushu oluzenzekelayo. Ngale ndlela, isixhobo ngokwaso sinokulawula ukubala iidigri zento okanye ulwelo esisebenza kulo kwaye oko kwandisa ukuchaneka kokubala.
Zisetyenziswa ngokubanzi kwezolimo, kumashishini, kumadama okudada, phakathi kwezinye iindawo. Ziqhelekile ukuba zisetyenziswe emanzini nakwimilinganiselo yomhlaba ukwazi iipropathi zeekhemikhali eziqulethweyo. Ingasetyenziselwa ezinye izinto zasekhaya ezinje ngomlinganiso ekulungisweni kwewayini elungileyo, kuba iwayini ephantsi kakhulu kwiasidi ithathwa ngokuba yomelele. Isetyenziselwa inkqubo yokwenza itshizi.
Ibhetri, ubungakanani kunye noyilo
Ezi zinto zixabisekileyo zibalulekile xa kufikwa ekwazini ukuba loluphi uhlobo olulungele ukusetyenziswa kwakho. Kuba olona hlobo lukhoyo lolona lusebenzayo kunye neebhetri, kuya kufuneka uyazi ukuba yintoni amandla abo. Enye yezinto ezinefuthe kubomi bebhetri kunye nexesha elinokuthi lisetyenziswe luhlobo lwesakhiwo kunye nescreen seLCD apho idatha yokulinganisa iya kuchazwa ngokucacileyo.
Ngokucacileyo, ukuba isikrini siyakhanya, ibhetri inokuhlala kancinci ngaphantsi kwezinye iimodeli ezingenayo. Nangona kunjalo, imodeli nganye inika ixesha elithile lokuzimela.
Ngokumalunga nobukhulu kunye noyilo, sele ixhomekeke kwinto ofuna ukuyikhetha. Ezona zinto zixhaphakileyo nezisebenzisekayo ekusetyenzisweni kobuchwephesha yilezo zinobuchule beepokotho ze-pH yeemitha. Oku kuvumela imilinganiselo yabo ukuba igqibelele ukuze bakwazi ukubasa phantse naphina. Kubalulekile ukuba aziphelelanga kubukhulu kodwa zikwanobunzima bokukhanya. Ngale ndlela, awuzukusebenza nzima kakhulu ukuze ukwazi ukusebenzisa okanye ukuhambisa.
Ukuba ubuza ukuba yimalini iindleko zepH yedijithali, siza kudwelisa ezinye zeemodeli ezaziwayo nezona zisetyenziswayo kwintengiso.
Ezona mitha ze-pH zidijithali zibalaseleyo
Enye yezona zinto ziluncedo ezikhoyo. Kukhanya kakhulu kwaye inokuphathwa ngokulula naphi na apho ufuna khona. Enye yezona ngxaki ziphambili kukuba ayizilinganisi ngokuzenzekelayo. Kuyacetyiswa ukuba uyilinganise kwakhona rhoqo emva kweeveki ezi-4 ukubonelela ngokusebenza ngokukuko kunye nokuchaneka kwimilinganiselo. Ungayithenga ngokuchofoza apha.
Ithekhnoloji yembuyekezo yobushushu ezenzekelayo eyenza ichaneke ngakumbi kunezinye iimodeli. Inomda wempazamo ye-0.05 kuphela. Inesikrini esinohlobo lweLCD ngokukhanyisa ukuze ubalo ngalunye lubonakale ngokucacileyo. Ezinye iipowder zilahlekile ukuze zikwazi ukulinganisa isixhobo. Ungayithenga le mveliso ngokunqakraza apha.
Ndiyathemba ukuba olu lwazi ungafunda ngakumbi malunga neepD zeemitha zedijithali kwaye ufunde ukuba ungalufumana njani uninzi lwazo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ngeentlanzi » abanye » I-Digital pH yeemitha